Unqulo Olumkholisayo UThixo | Okufundiswa YiBhayibhile
Isahluko Seshumi Elinesihlanu
Ngaba zonke iinkonzo ziyamkholisa uThixo?
Sinokulubona njani unqulo lokwenyaniso?
Ngoobani abanquli bakaThixo bokwenyaniso emhlabeni namhlanje?
1. Siya kungenelwa njani ukuba sinqula uThixo ngendlela efanelekileyo?
UYEHOVA UTHIXO usikhathalele ngokwenene yaye ufuna singenelwe kulwalathiso lwakhe lothando. Ukuba simnqula ngendlela efanelekileyo, siya konwaba size siphephe iingxaki ezininzi ebomini. Yaye uya kusisikelela aze asincede. (Isaya 48:17) Kodwa ke, kukho amakhulukhulu eenkonzo ezithi zifundisa inyaniso ngoThixo. Ukanti zineemfundiso ezahlukene kakhulu ngokuphathelele ukuba ungubani uThixo noko afuna sikwenze.
2. Sinokuyifunda njani indlela echanileyo yokunqula uYehova, yaye nguwuphi umzekelo osincedayo ukuba sikuqonde oku?
2 Unokuyazi njani indlela echanileyo yokunqula uYehova? Akukho mfuneko yokuba uhlolisise uze uthelekise iimfundiso zazo zonke ezi nkonzo zininzi kangaka. Ufanele nje kuphela ufunde oko iBhayibhile ikufundisayo ngokwenene ngokuphathelele unqulo lokwenyaniso. Ngokomzekelo: Kumazwe amaninzi, kukho ingxaki yemali yomgunyathi. Ukuba ubunokunikwa umsebenzi wokuqokelela yonke imali enjalo, ubuya kuqala ngaphi? Ngaba ubuya kuhlolisisa zonke iindidi zemali yomgunyathi? Akunjalo. Bekuya kuba bubulumko ukuhlolisisa imali yokwenene. Xa uqonda kakuhle ukuba imali yokwenene ikhangeleka njani na, kuya kuba lula ukuyibona eyomgunyathi. Ngokufanayo, xa sifunda indlela yokubona unqulo lokwenyaniso, siya kukwazi ukuzibona iinkonzo zobuxoki.
3. Ngokutsho kukaYesu, simele senze ntoni ukuze uThixo akholiswe sithi?
3 Kubalulekile ukuba simnqule uYehova ngendlela emkholisayo. Abantu abaninzi bakholelwa ukuba zonke iinkonzo ziyamkholisa uThixo, kodwa iBhayibhile ayikufundisi oko. Akwanelanga nokutsho nje ngomlomo ukuba ungumKristu. UYesu wathi: “Asingabo bonke abathi kum, ‘Nkosi, Nkosi,’ abaya kungena ebukumkanini bamazulu, kodwa ngulowo wenza ukuthanda kukaBawo osemazulwini oya kungena.” Ngoko ukuze uThixo akholiswe sithi, simele sifunde ngoko akufunayo kuthi size sikwenze. UYesu wababiza abo bangakwenziyo ukuthanda kukaThixo ngokuthi ‘ngabenzi bokuchasene nomthetho.’ (Mateyu 7:21-23) Njengemali yomgunyathi, unqulo lobuxoki alunaxabiso lokwenene. Okubi nakakhulu kukuba, eneneni unqulo olunjalo luyingozi.
4. Athetha ukuthini amazwi kaYesu angeendlela ezimbini, yaye nganye kuzo ikhokelela phi?
4 UYehova unika mntu ngamnye osemhlabeni ithuba lokuzuza ubomi obungunaphakade. Kodwa ukuze sifumane ubomi obungunaphakade eParadesi, simele simnqule uThixo ngendlela efanelekileyo size siphile ngendlela emkholisayo. Ngelishwa, abaninzi abavumi ukwenza oko. Kungenxa yoko le nto uYesu wathi: “Ngenani ngesango elimxinwa; ngokuba ibanzi kwaye iphangalele indlela esa entshabalalweni, yaye baninzi abangena ngayo; kanti limxinwa isango kwaye imxinwa indlela esa ebomini, yaye bambalwa abayifumanayo.” (Mateyu 7:13, 14) Unqulo lokwenyaniso lukhokelela kubomi obungunaphakade. Lona unqulo lobuxoki lukhokelela kwintshabalalo. UYehova akafuni ukuba kutshabalale namnye umntu, yaye kungenxa yoko le nto enika bonke abantu ithuba lokuba bafunde ngaye. (2 Petros 3:9) Ngoko ke, eneneni indlela esimnqula ngayo uThixo inokuthetha ubomi okanye ukufa kuthi.
INDLELA YOKUBONA UNQULO LOKWENYANISO
5. Sinokubabona njani abo baqhelisela unqulo lokwenyaniso?
5 Inokufunyanwa njani “indlela esa ebomini”? UYesu wathi unqulo lokwenyaniso lwaluza kubonakala kwindlela abaphila ngayo abantu abaluqheliselayo. Wathi: “Nobaqonda ngeziqhamo zabo. . . . Wonke umthi olungileyo uvelisa isiqhamo esihle.” (Mateyu 7:16, 17) Ngamany’ amazwi, abo baqhelisela unqulo lokwenyaniso babonakala ngeenkolelo zabo nangokuziphatha kwabo. Nangona bengafezekanga yaye besenza iimpazamo, abanquli bokwenyaniso bazimisele ukwenza ukuthanda kukaThixo. Masihlolisise iinkalo ezintandathu esinokubabona ngazo abo baqhelisela unqulo lokwenyaniso.
6, 7. Abakhonzi bakaThixo bayigqala njani iBhayibhile, yaye uYesu wawumisela njani umzekelo kule nkalo?
6 Abakhonzi bakaThixo bazisekela eBhayibhileni iimfundiso zabo. IBhayibhile ithi: “Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siyingenelo ekufundiseni, ekohlwayeni, ekulungelelaniseni izinto, ekuqeqesheleni ebulungiseni, ukuze umntu kaThixo awufanelekele aze awuxhobele ngokupheleleyo wonke umsebenzi olungileyo.” (2 Timoti 3:16, 17) Umpostile uPawulos wabhala wathi kumaKristu: “Xa nalamkelayo ilizwi likaThixo, enaliva kuthi, nalamkela, kungekhona njengelizwi labantu, kodwa, kanye njengokuba kunjalo enyanisweni, njengelizwi likaThixo.” (1 Tesalonika 2:13) Ngoko iinkolelo nezenzo zonqulo lokwenyaniso azisekelwanga kwiimbono okanye kwizithethe zabantu. Zisekelwe kwiLizwi likaThixo eliphefumlelweyo, iBhayibhile.
7 UYesu Kristu wamisela umzekelo ofanelekileyo ngokuthi azisekele eLizwini likaThixo iimfundiso zakhe. Xa wayethandaza kuYise wasezulwini, wathi: “Ilizwi lakho liyinyaniso.” (Yohane 17:17) UYesu wayelikholelwa iLizwi likaThixo, yaye konke awayekufundisa kwakuvisisana neZibhalo. UYesu wayedla ngokuthi: “Kubhaliwe kwathiwa.” (Mateyu 4:4, 7, 10) Emva koko wayecaphula ezibhalweni. Ngokufanayo, abantu bakaThixo namhlanje abafundisi iimbono zabo. Bakholelwa ukuba iBhayibhile liLizwi likaThixo, yaye bazisekela ngokuqinileyo kuyo iimfundiso zabo.
8. Yintoni ebandakanyekileyo ekunquleni uYehova?
8 Abo baqhelisela unqulo lokwenyaniso banqula uYehova kuphela yaye bazisa abanye ngegama lakhe. UYesu wathi: “NguYehova uThixo wakho omele umnqule, yaye nguye yedwa omele unikele inkonzo engcwele kuye.” (Mateyu 4:10) Ngoko abakhonzi bakaYehova abanquli nabani na ongomnye ngaphandle kwakhe. Unqulo lwabo luquka ukuxelela abantu ngegama likaThixo wokwenyaniso nangeempawu zakhe. INdumiso 83:18 ithi: “Wena, ogama linguYehova, nguwe wedwa Oyena Uphakamileyo phezu komhlaba wonke.” UYesu wasimisela umzekelo wokunceda abanye bamazi uThixo, njengoko wathi emthandazweni: “Ndilibonakalisile igama lakho kubantu ondinike bona bephuma ehlabathini.” (Yohane 17:6) Ngokufanayo, abanquli bokwenyaniso namhlanje bafundisa abanye ngegama likaThixo, ngeenjongo zakhe, nangeempawu zakhe.
9, 10. AmaKristu okwenyaniso alubonisa njani uthando omnye komnye?
9 Abantu bakaThixo babonisa uthando lokwenene nolungazingciyo omnye ngomnye. UYesu wathi: “Bonke baya kwazi ukuba ningabafundi bam, ukuba ninothando phakathi kwenu.” (Yohane 13:35) AmaKristu okuqala ayenalo uthando olunjalo. Uthando lobuthixo luphelisa ubuhlanga nocalucalulo, luze ludibanise abantu babe yimbumba emanyeneyo. (Kolose 3:14) Alukho umanyano olunjalo lothando phakathi kwamalungu onqulo lobuxoki. Sikwazi njani oko? Ayabulalana ngenxa yocalucalulo lobuzwe nolobuhlanga. AmaKristu okwenyaniso akathabathi zixhobo ukuze abulale amanye amaKristu okanye nabani na. IBhayibhile ithi: ‘Yiyo ke le indlela ababonakala ngayo abantwana bakaThixo nabantwana bakaMtyholi: Bonke abangaqhubekiyo besenza ubulungisa abaphumi kuThixo, kukwanjalo nangalowo ungamthandiyo umzalwana wakhe. Sifanele sithandane; singabi njengoKayin, owaphuma kulowo ungendawo waza wambulala umntakwabo.’—1 Yohane 3:10-12; 4:20, 21.
10 Kambe ke, uthando lokwenene luthetha okungakumbi kunokuphepha nje ukubulala abanye. Ngokuzithandela amaKristu okwenyaniso asebenzisa ixesha lawo, amandla awo, kwanemali yawo, ukuze ancede aze akhuthaze abanye. (Hebhere 10:24, 25) Ayabanceda abo babandezelekileyo, yaye anyanisekile kwabanye. Eneneni, aphila ngokuvisisana nesiluleko seBhayibhile esithi “masenze okulungileyo kubo bonke.”—Galati 6:10.
11. Kutheni kubalulekile ukumamkela uYesu Kristu njengalowo uThixo amsebenzisayo ukuze sifumane usindiso?
11 AmaKristu okwenyaniso amele amamkela uYesu Kristu njengalowo usetyenziswa nguThixo ukuze sifumane usindiso. IBhayibhile ithi: “Akukho lusindiso kuye nabani na ongomnye, kuba alikho elinye igama phantsi kwezulu elinikelweyo phakathi kwabantu esimele ukusindiswa ngalo.” (IZenzo 4:12) Njengoko sibonile kwiSahluko 5, uYesu wanikela ngobomi bakhe njengentlawulelo yabantu abathobekileyo. (Mateyu 20:28) Ngaphezu koko, uYesu umiselwe nguThixo njengoKumkani woBukumkani basezulwini oza kulawula wonke umhlaba. Yaye uThixo ufuna simthobele uYesu size sizisebenzise iimfundiso zakhe ukuba sifuna ukuzuza ubomi obungunaphakade. Kungenxa yoko le nto iBhayibhile isithi: “Lowo ubonisa ukholo kuNyana unobomi obungunaphakade; lowo ungamthobeliyo uNyana akayi kububona ubomi.”—Yohane 3:36.
12. Kubandakanya ntoni ukungabi yonxalenye yehlabathi?
12 Abanquli bokwenyaniso abayonxalenye yehlabathi. Xa wayesiwe ematyaleni phambi komlawuli ongumRoma uPilato, uYesu wathi: “Ubukumkani bam abuyonxalenye yeli hlabathi.” (Yohane 18:36) Kungakhathaliseki ilizwe abahlala kulo, abalandeli bokwenyaniso bakaYesu baphantsi kolawulo loBukumkani basezulwini, ngoko ababandakanyeki kwaphela kwimicimbi yehlabathi yezobupolitika. Ababi nanxaxheba kwaphela kwiimpikiswano zezobupolitika. Noko ke, abanquli bakaYehova abaphazamisani nabanye abazibandakanya nezobupolitika, befuna izikhundla zezobupolitika, okanye ukuvota. Yaye nangona abanquli bokwenyaniso bakaThixo bengabandakanyeki kwezobupolitika, bayawuthobela umthetho. Ngoba? Ngenxa yokuba iLizwi likaThixo libayalela ukuba ‘bawathobele amagunya ongamileyo’ aseburhulumenteni. (Roma 13:1) Xa oko kufunwa yinkqubo yezobupolitika kungqubana nokuthanda kukaThixo, abanquli bokwenyaniso baxelisa umzekelo wabapostile abathi: “Simele sithobele uThixo njengomlawuli kunabantu.”—IZenzo 5:29; Marko 12:17.
13. Abalandeli bokwenyaniso bakaYesu babugqala njani uBukumkani bukaThixo, ngoko liliphi inyathelo abalithabathayo?
13 Abalandeli bokwenyaniso bakaYesu bashumayela ukuba uBukumkani bukaThixo bukuphela kwethemba loluntu. UYesu wathi: “Ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kushunyayelwa kuwo wonke umhlaba omiweyo kube bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke kufike ukuphela.” (Mateyu 24:14) Kunokuba bakhuthaze abantu ukuba bathembele kubalawuli abangabantu ukuba bacombulule iingxaki zabo, abalandeli bokwenyaniso bakaYesu Kristu bavakalisa uBukumkani bukaThixo basezulwini njengekuphela kwethemba loluntu. (INdumiso 146:3) UYesu wasifundisa ukuba sithandazele loo rhulumente ugqibeleleyo sithi: “Mabufike ubukumkani bakho. Makwenzeke ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengasezulwini.” (Mateyu 6:10) ILizwi likaThixo laxela kwangaphambili ukuba obu Bukumkani basezulwini “buya kuzityumza buziphelise zonke ezi zikumkani [zikhoyo ngoku], buze bona bume ukusa kwixesha elingenammiselo.”—Daniyeli 2:44.
14. Yiyiphi inkonzo okholelwa ukuba inazo iimpawu zonqulo lokwenyaniso?
14 Njengoko ucingisisa ngoko sisandul’ ukukuxubusha, khawukhe uzibuze: ‘Yiyiphi inkonzo esekela zonke iimfundiso zayo eBhayibhileni ize yazise abanye ngegama likaYehova? Yiyiphi inkonzo ebonisa uthando lobuthixo, ebonisa ukholo kuYesu, engeyonxalenye yehlabathi, nevakalisa ukuba buBukumkani bukaThixo kuphela obulithemba lokwenene loluntu? Kuzo zonke iinkonzo ezikhoyo emhlabeni, yiyiphi enazo zonke ezi mpawu?’ Izicacele into yokuba ngamaNgqina kaYehova.—Isaya 43:10-12.
YINTONI OZIMISELE UKUYENZA?
15. Yintoni enye uThixo afuna siyenze ngaphandle kokukholelwa nje ukuba ukho?
15 Ukukholelwa nje kuThixo akwanelanga ukuba sifuna ukumkholisa. Ngapha koko, iBhayibhile ithi kwaneedemon ziyakholelwa ukuba uThixo ukho. (Yakobi 2:19) Kodwa ngokucacileyo azikwenzi ukuthanda kukaThixo yaye akakholiswa zizo. Ukuze uThixo akholiswe sithi, asimelanga nje sikholelwe ukuba ukho, kodwa simele senze ukuthanda kwakhe. Kwakhona simele sizahlukanise nonqulo lobuxoki size samkele unqulo oluyinyaniso.
16. Sifanele sikugqale njani ukuba nenxaxheba kunqulo lobuxoki?
16 Umpostile uPawulos wathi asimele sibe nanxaxheba kunqulo lobuxoki. Wabhala wathi: “‘Phumani phakathi kwabo, nizahlule,’ utsho uYehova, ‘nento engahlambulukanga ningayichukumisi’; ‘yaye ndiya kunamkela.’” (2 Korinte 6:17; Isaya 52:11) Ngoko amaKristu okwenyaniso aphepha nantoni na enento yokwenza nonqulo lobuxoki.
17, 18. Yintoni “iBhabhiloni Enkulu,” yaye kutheni kungxamisekile nje ukuba ‘siphume kuyo’?
17 IBhayibhile ibonisa ukuba zonke iindidi zonqulo lobuxoki ziyinxalenye ‘yeBhabhiloni Enkulu.’ * (ISityhilelo 17:5) Elo gama lisikhumbuza ngesixeko samandulo saseBhabhiloni, apho lwaqala khona unqulo lobuxoki emva koMkhukula wexesha likaNowa. Iimfundiso nezithethe ezininzi ezikhoyo namhlanje kunqulo lobuxoki zaqala kwakudala eBhabhiloni. Ngokomzekelo, amaBhabhiloni ayenqula oothixo abangoobathathu emnye. Namhlanje, eyona mfundiso iphambili kwiinkonzo ezininzi yimfundiso kaBathathu Emnye. Kodwa iBhayibhile ifundisa ngokucacileyo ukuba mnye kuphela uThixo oyinyaniso, uYehova, yaye uYesu Kristu nguNyana wakhe. (Yohane 17:3) Kwakhona amaBhabhiloni ayekholelwa ukuba abantu banomphefumlo ongafiyo oqhubeka uphila emva kokuba umntu efile, nonokungcungcuthekiswa kwindawo yentuthumbo. Nanamhlanje, iinkonzo ezininzi zifundisa ukuba abantu banomphefumlo okanye umoya ongafiyo onokuthuthunjiswa esihogweni somlilo.
18 Ekubeni unqulo lweBhabhiloni yamandulo lwasasazeka emhlabeni wonke, iBhabhiloni Enkulu yanamhlanje inokuchazwa ngokufanelekileyo njengobukhosi behlabathi bonqulo lobuxoki. Yaye uThixo waxela kwangaphambili ukuba obu bukhosi bonqulo lobuxoki buza kutshatyalaliswa ngequbuliso. (ISityhilelo 18:8) Ngaba uyasibona isizathu sokuba kubalulekile ukuba uzahlukanise nayo nayiphi na inxalenye yeBhabhiloni Enkulu? UYehova uThixo ufuna ukuba ‘uphume’ kuyo ngokukhawuleza ngoxa kusekho ixesha.—ISityhilelo 18:4.
Ukuba ukhonza uYehova kunye nabantu bakhe, uya kuzuza okukhulu ngakumbi kunoko kukulahlekelayo
19. Uya kuzuza ntoni ngokukhonza kwakho uYehova?
19 Ngenxa yokukhetha kwakho ukuzahlukanisa nonqulo lobuxoki, abanye basenokuyeka ukunxulumana nawe. Kodwa ke, ngokukhonza kwakho uYehova kunye nabantu bakhe uya kuzuza okukhulu ngakumbi xa kuthelekiswa nabo bahlobo bakulahlekeleyo. Njengabafundi bakaYesu bokuqala abashiya ezinye izinto baza bamlandela, nawe uya kuba nabantakwenu noodadewenu abaninzi bokomoya. Uya kuba yinxalenye yentsapho enkulu esehlabathini lonke yezigidi zamaKristu okwenyaniso anothando lokwenene. Yaye uya kuba nethemba elimangalisayo lobomi obungunaphakade “kwinkqubo yezinto ezayo.” (Marko 10:28-30) Mhlawumbi ekuhambeni kwexesha, abo baye bakulahla ngenxa yeenkolelo zakho nabo baya kuhlolisisa oko kufundiswa yiBhayibhile baze babe ngabanquli bakaYehova.
20. Liyintoni ithemba labo bakunqulo lokwenyaniso?
20 IBhayibhile ifundisa ukuba kungekudala uThixo uza kuyiphelisa le nkqubo ingendawo yezinto aze azise ihlabathi elitsha lobulungisa ngaphantsi kolawulo loBukumkani bakhe. (2 Petros 3:9, 13) Kuya kube kumangalisa ngokwenene ukuphila kwelo hlabathi! Yaye kuloo nkqubo intsha yobulungisa, kuya kubakho unqulo olunye kuphela oluyinyaniso. Ngaba akubobulumko na ukuba uqale ngoku ukuzinxulumanisa nabanquli bokwenyaniso?
ABO BANQULA UTHIXO OYINYANISO
bazisekela eBhayibhileni iimfundiso zabo
banqula uYehova kuphela yaye bazisa abanye ngegama lakhe
babonisa uthando lokwenene omnye ngomnye
bamamkela uYesu njengalowo uThixo amsebenzisayo ukuze sifumane usindiso
bashumayela ukuba buBukumkani bukaThixo kuphela obulithemba loluntu
^ isiqe. 17 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngokuphathelele isizathu sokuba iBhabhiloni Enkulu imela ubukhosi behlabathi bonqulo lobuxoki, bona iSihlomelo, kwiphepha 219-20.
Lunye kuphela unqulo lokwenyaniso.—Mateyu 7:13, 14.
Unqulo lokwenyaniso lubonwa ngeemfundiso nangezenzo zalo.—Mateyu 7:16, 17.
Unqulo lwamaNgqina kaYehova luyamkholisa uThixo.—Isaya 43:10.